Ishibhile 4 × 4 Twill Carbon Fiber ifektri kanye nabaphakeli | UChengyang
Indwangu yeCarbon Fibre Twill wuhlobo olusha lwezinto ze-fiber ezinamandla amakhulu kanye ne-modulus fiber ephezulu enokuqukethwe kwekhabhoni ngaphezu kwe-95%.
I-Carbon fiber "insimbi engaphakathi ethambile yangaphandle", ikhwalithi ilula kune-aluminium yensimbi, kepha amandla aphakeme kunensimbi, amandla aphindwe kasikhombisa kunensimbi; futhi inokumelana nokugqwala, izici eziphezulu ze-modulus, kuyinto ebalulekile ekusetshenzisweni kwezempi nokuvikela umphakathi.
Indwangu yeCarbon Fibre Twill
Indwangu yeCarbon Fibre Twill uhlobo olusha lwezinto ze-fiber ezinamandla amakhulu kanye ne-modulus fiber ephezulu enekhabhoni engaphezulu kwama-95% .Carbon fiber "insimbi engaphakathi ethambile yangaphakathi", ikhwalithi ilula kune-aluminium yensimbi, kepha amandla aphezulu kunensimbi, amandla ayi-7 izikhathi zensimbi; futhi inokumelana nokugqwala, izici eziphezulu ze-modulus, kuyinto ebalulekile ekusetshenzisweni kwezempi nokuvikela umphakathi.
1) Amandla aphakeme, ukuminyana okuphansi, amandla angafinyelela ezikhathini zensimbi eziyi-6-12, ukuminyana kuyikota eyodwa yensimbi.
2) Amandla okukhathala aphezulu;
3) Ukuzinza okuphezulu;
4) Ukuqhutshwa okuhle kakhulu kagesi nokushisa;
5) Ukusebenza okuhle kakhulu kwe-vibration attenuation;
6) Ukumelana nokushisa okuhle kakhulu;
I-7) I-coefficient yokungqubuzana incane futhi ukumelana nokugqoka kuhle kakhulu;
8) Corrosion ukumelana nokuphila isikhathi eside.
9) Ukungena kwe-X-ray kukhulu.
I-10) I-plasticity enhle, ingenziwa kunoma yikuphi ukuma ngokuya kwesimo sokubunjwa, kulula ukwakha futhi kulula ukucubungula.
Indwangu yeCarbon Fibre Twill Isetshenziswa kabanzi ekubambeni kokudoba, imishini yezemidlalo, izimpahla zemidlalo, i-aerospace neminye imikhakha, ezempi ezisetshenziselwa ukwenza amarokhethi, imicibisholo, iziphuphutheki, i-radar, izimoto ezingangeni ezinhlamvu, amavesti okuvimbela izinhlamvu kanye neminye imikhiqizo yezempi ebalulekile. Njengamaraki ebhayisikili, imfoloko phambi kwebhayisikili, izingxenye zebhayisikili, izingxenye zegalofu, izinti ze-hockey, izigxobo zokushushuluza, izinduku zokudoba, amalulwane e-baseball, ama-racquets ezimpaphe, amashubhu azungezayo, izinto zezicathulo, izigqoko ezinzima, amavesti okuvimbela izinhlamvu, izigqoko zokuvikela izinhlamvu, imikhumbi, ama-yachts , izikebhe, amapaneli acabalele, imishini yezokwelapha, izihlungi zokuqoqa uthuli, umusi (umshini) umkhakha wezimoto, imishini yezimboni, ukuqinisa isakhiwo, izindwani zomoya, njll.
Ukupakisha: ukuthekelisa ukupakisha okujwayelekile noma okwenziwe ngezifiso njengemfuneko yakho.
Ukulethwa: ngolwandle / ngomoya / nge-DHL / Fedex / UPS / TNT / EMS noma enye indlela oyithandayo.
Langaphambilini 1k Carbon Fibre Indwangu
Olandelayo: Indwangu ye-Blue Carbon Fibre
I-4x4 Twill Carbon Fibre
Intengo Ye-Carbon Fibre Yendwangu
ICarbon Fibre 4k
Indwangu ye-Honeycomb Carbon Fibre
Abakhiqizi Bezindwangu Zekhabhoni
Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu,